XOG….Boqolaal ciidamo Soomaali ah oo lagu Laayay dagaalkii Tigreega ee Itoobiya…………………………………………. | Banaadir Times
HomeXulashadaXOG....Boqolaal ciidamo Soomaali ah oo lagu Laayay dagaalkii Tigreega ee Itoobiya.................................................
XOG….Boqolaal ciidamo Soomaali ah oo lagu Laayay dagaalkii Tigreega ee Itoobiya………………………………………….
Tobanaankun oo ka tirsan askarta Soomaalida ee loo adeegsaday calafka madfaca ee weerarkii dhawaan ka dhacay gobolka Tigreega ee Itoobiya ayaa lagu dilay iskahorimaadka ka dib markii ay tababar ku soo dhammaysteen Eritrea bilo ka hor, laakiin dowladda Soomaaliya ayaa mar sii horreysay beenisay ku lug lahaanshaha dagaalka ka socda waqooyiga Itoobiya.
Bilo uun ka dib markii ay soo baxeen warbixino ku saabsan calooshood u shaqeystayaal Soomaali ah oo la geeyay jiidaha hore ee Libya si loo xoojiyo ciidamada dowladda ee dagaalka kula jira xoogaga mucaaradka, warbixinno cusub ayaa shaaca ka qaadaya in tobanaan Soomaali ah lagu dilay dagaalladii Tigreega ee Itoobiya.
Liiska dadka la dilay waxaa u soo gudbiyay ciidanka Soomaaliya ciidamada difaaca ee Eritrea, kuwaas oo tababaray una geeyay qaybo ka mid ah gobolka Itoobiya oo xasilloon bishii Nofeembar, qaar kale oo badan ayaa la la’yahay, kuwaas oo qoysaskoodu ay murugaysan yihiin oo ay had iyo jeer u qaadaan baraha bulshada. iyagoo ugu baaqaya madaxweynaha Soomaaliya iyo dowladiisa inay sharraxaad ka bixiyaan haddii wiilashoodu dhinteen ama ay nool yihiin iyo halka ay ku sugan yihiin.
Laakiin dowladda ayaa iska indha tirtay wicitaanada qoysaska wiilashooda la la’aa bilooyin badan iyo sharaxaad ay ka bixiyeen mas’uuliyiinta arintaas oo aan wali la soo arkin.
Tobanaan askari ayaa la keenay dalkooda kadib markii ay tababar ku soo dhameeyeen dalka Eritrea. Kuwaas waxaa ka mid ah Axmed, oo u sheegay MOL sheekada boqolaal askari oo Soomaali ah oo si lama filaan ah loogu tuuray dagaalka Tigreega ka dib markii ay tababarro ku soo dhammaysteen Eritrea.
Ehelka soke ayaa noo sheegay in lagu dari doono boqolaal dhalinyaro ah oo loo qorey in ay ka mid noqdaan ciidamada militariga ee Qadar markii dambena waxaa nalooga soo biirey ciidamada Soomaaliya. Waxaa nalaku xiray xerada Xalane markii dambena waxaa loo duuliyay Eritrea, ”ayuu yiri Axmed.
“Markii aan dhamaystay tababarka lixda bilood ah ee xero tababar oo ku taal Anseba, 2,500 oo ka mid ah 3,000 oo askar Soomaali ah ayaa basas lagu raray habeenimadii 1da Nofeembar. Mid ka mid ah macallimiinteena ayaa goor dambe noo sheegay in loo qaaday gobolka Tigreega ee Itoobiya si ay uga qeyb galaan dagaalka ka socda halkaas.
Axmed iyo 2 askari oo kale, oo dhawaan ka soo laabtay guryahoodii tababarka ee Eriteriya, ayaa MOL u sheegay in tirada saxda ah ee Soomaalida loo diray dagaalka ka socda gobolka Tigray aan la ogeyn waxayna xaqiijiyeen in dhowr askari, oo dhawaan la sheegay inay dhinteen, waxay ka soo qalin jabiyeen isla iskuulkii tababarka militariga ee ay dhigan jireen oo ay saaxiibo dhow ahaayeen.
Askarta Soomaalida ah ee la sheegay in lagu dilay gobolka Tigray waxaa ka mid ah Ibraahim Diini, Saciid Aadan, C / laahi Muumin, Nuunow Madkey iyo Maslax Cali, dhammaantoodna waxay soo xaadireen isla xerada tababarka ee tii Axmed uu ka qalin jabiyay.
Majiro wax soomaali ah oo ka badbaaday dagaalkii ka dhacay gobolka Tigray oo la ogyahay laakiin taariikhda 2,500 askari laga soo daabulay xero militari oo ku taala Anseba waxay ahayd todobaadyo yar uun ka hor markii ciidamada Eriteriya soo galeen Tigreega ay cinwaano ka dhigteen aduunka oo dhan waxaana la aaminsan yahay inay yihiin dufcaddii ugu horeysay. oo ka mid ah ciidamada Soomaaliya in ay ka soo talaabeen xadka ay la leeyihiin Ciidamada Difaaca Eritrea.
Kaliya 500 oo ciidamo Soomaali ah ayaa ilaa hada kasoo laabtay Eritereya waxaana warar hore ay soo jeediyeen in militariga Ereteriya uu tababaray in kabadan 10,000 oo Soomaali ah, kuwaas oo loo adeegsan doono in dowlada Soomaaliya ee reer galbeedku taageero ka difaaco weerarada Al-Shabaab inta lagu guda jiro doorashooyinka dalka ee loo qorsheeyay horaanta 2021.
Axmed wuxuu xasuustaa maalintii in ka badan 30 dhalinyaro Soomaali ah ay ku sumoobeen cunto gudaha xeradooda Anseba ka dib markii ay diideen inay u hogaansamaan awaamiirta macalimiintooda militariga halka kuwa kalena ay naftooda ku waayeen iyagoo ka boodaya buuraha xerada.
Exclusive: Hundreds of Somali Troops Used as Cannon Fodder in Ethiopia’s Tigray War from Somalia
Previous articleDagaalo ka dhacay degaano ka tirsan Gobolka Jubbada Hoose
Next articleSheekh Shariif oo walaac ka muujiyay khilaafka kajira doorashooyinka